चरम गरिबीको नमुनाः छोरीको विहेमा सिंगो गाउँनै दाईजो ! | Rajmarga
काठमाडौ । गाउँखाने कथा नेपाली जनजिब्रोमा चलिआएको ज्ञानगुन बढाउने रमाइलो खेल हो। गाउँ खाने कथाको जवाफ दिन नसक्नेले सोध्नेलाई गाउँ दिनुपर्छ। गाउँखाने कथामा जस्तै पर्साको एउटा गाउँका बासिन्दाले वास्तविक जीवनमै एउटा गाउँ दिएका छन्।
तर, यहाँ गाउँखाने कथा सोध्नेलाई गाउँ दिइएको होइन, विवाहमा छोरी–ज्वाइँलाई गाउँ नै दाइजो दिइएको हो। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–७ मा बहिनी नैना डोमको बिहे हुँदा उनलाई दाइजोमा गाउँ दिइएको उनका दाजु लक्ष्मी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बिहे गर्दा दाइजो दिन बुबासँग पैसा नभएकाले दाइजोमा गाउँ दिएर बहिनीको बिहे गरिएको हो।’ करिब २० वर्षअघि भारतको इनर्वा बजारमा नैना डोमको बिहे भएको हो।
उनलाई विश्रामपुरको दक्षिण टोला दाइजोमा दिइएको हो। उनका अनुसार बहिनीबाहेक डोम समुदायका अरु कोही पनि त्यो गाउँमा माग्न वा कमाउन जान पाउँदैनन्।
दाइजोमा पाएको गाउँबाट मागेर आफ्नो गुजारा चलिरहेको नैना सुनाउँछिन्। ‘त्यो पनि मुस्किलले दुई छाक खान पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूसँग न पैसा छ, न त बस्ने घर नै।’ नहरछेउको अलिकति खाली जग्गामा टाँगिएको त्रिपाल नै आफ्नो घरसंसार भएको उनी बताउँछिन्।
यतिमात्र नभई रकम अभाव भएका बेला दाइजो पाएको गाउँ बन्धकी राखी ऋण लिएर उनी आफ्नो गर्जो टार्छिन्। नगद लेनदेनमा जस्तै यस्तो ऋणको पनि म्याद हुन्छ। अन्न्पूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
Previous post: मधेशवादी दलद्वारा सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी!
Next post: यस्ता श्रीमान/श्रीमती धोकेबाज हुने रहेछन्, कारण यस्तो छ